Raisina ho tombontsoam-bahoaka ny fanamboaran-dalana Soavimasoandro-Ivato. Lalana efa misy, miainga eo Tsarasaotra Soavimasoandro ity hatsaraina ity, mandalo ny sisin’ny lemaka Laniera sy ny farihy Soute à Bombe ary mivoaka eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato.
Noraisina io fanapahan-kevitra io teo anivon’ny filankevitry ny minisitra, ny 10 febroary teo, tafiditra ao anatin’ny fanamboarana fotodrafitrasa handraisana ny fivoriamben’ny Frankofonia hatao eto Madagasikara amin’ity taona 2016 ity.
Hisy tohodrano mamokatra herinaratra hatsangana any Amboasary, Behenjy, distrika Ambatolampy. Hananganana azy ny reniranon’Andromba, ary afaka mamatsy ny manodidina an’Ambatolampy sy ny manodidina. Tsy voafaritra ny tanjaky ny herinaratra voakarina sy ny orinasa hanao ny asa na hitantana azy, na ny Jirama na orinasa tsy miankina. Tafiditra ao anatin’ny paikady hanatsarana ny tontolon’ny angovo ity tetikasa ity. Hatreto, tsy misy ny tetikasa ahafahan’ny Jirama manitatra ny ambaindainy na koa tosika ahafahany mamokatra herinaratra avy amin’ny tohodrano, satria saika gropy mandeha amin’ny solika avokoa ny fotodrafitrasa tantaniny.